5 Nzuzo nke ubawanye uzo okporo ahia site na ihe omuma
Ịmepụta isiokwu ndị na-amalite ịrịa ọrịa bụ ihe kachasị mkpa maka ndị niile bugoro blog. N'ezie,ọ na-achọ iche echiche na-agbanwe agbanwe, nke a na-ejikọta ya mgbe nile. Site na ịmepụta ihe ruru eruọdịnaya iji mepee usoro mgbasaozi mgbasaozi kwesịrị ekwesị, ọ bụla dị mkpa dị oke mkpa. Ivan Konovalov,Njikwa Ihe Nlekọta Ndị Ahịa nke Ọkachamara Ọrụ Ntanetị na-enye ndụmọdụ bara uru banyere otu esi eme ka mgbasa ozi ịbawanye.
1. Mepụta Mmasị Ọrịa Viral
Dee ederede na-adọrọ mmasị ma na-akpali mmasị nke ga-adọta mmasị ndị na-agụ akwụkwọ. Aha nke isiokwu gịbụ ihe kachasị mkpa mgbe ịdere ọdịnaya ọdịnaya. Bịa na utu aha mara mma nke gaweghara nlebara anya nke ndị ọbịa na ịntanetị. Ọ bụrụ na aha gị na-adọrọ mmasị, mgbe ahụ ị ga-akachaO nwere ike ịbụ na ị ga-enweta ihe kachasị na ya. E wezụga ịmepụta utu aha dị mma, dee ihe ederede ogologo oge.Nweta ihe omuma nke isiokwu gi ma kọwaputa isi ihe gi n'udi di nma. Ekeputarapost ga-eme ka ndị ọbịa gị na-agụ gị gụọ akụkụ ahụ dum. Tinye ihe oyiyi mara mma n'ime gịpost iji nyere ndị na-agụ akwụkwọ aka ịghọta ihe ederede gị n'ụzọ doro anya karị. N'ihi ya, ndị na-agụ akwụkwọ gị gagaa na blog gị ọzọ iji gụọ isiokwu na-esonụ.
2. Kpee ihe edere gi karia otu ugboro
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịkwalite okporo ụzọ gaa na blog gị, ịkwesịrị ịmanyekwu ndị ọbịa. Ụfọdụ ndị na-agụ akwụkwọ nwetainternet n'oge ehihie na ndị ọzọ n'abalị. Mee ka okporo ụzọ gị baawanye site n'ịkekọrịtagị edemede ọtụtụ ugboro n'ụbọchị ma ọ bụ otu ọnwa. Isi ihe ntanetị nke mgbasa ozi na-enyere akaị mezuo nke a bụ Facebook, Twitter, Pinterest, na Google. Jikọọ otu na mpagharandị metụtara ụlọ ọrụ gị na ịkekọrịta ndepụta gị..
3. Wụnye Okwu Kwesịrị Ekwesị
E nwere ọtụtụ puku isiokwu gburugburu ahịa. Otú ọ dị, ọtụtụ n'ime ha agaghị adaba na gịblog. Nke a pụtara na ị ga-ahọrọ amamihe ma wụnye ya. Ezi isiokwu kwesiri ka o doo anyaanabata, nke ga - eme ka ị nweta blog gị na ngwaọrụ dị iche iche gụnyere kọmpụtana ngosipụta ngosipụta. I kwesịkwara ịhọrọ isiokwu ngwa ngwa ngwa ngwa. Mgbe isiokwu gị na-ebu ngwa ngwa,ọ na - eme ka ndị ọbịa na - arapara na blog gị ma na - agụkwu posts. Na mgbakwunye, họrọ isiokwu nwereihe mara mma ma mara mma.
4. Tinye Mgbasa Ozi
Bọtị ntinye na-enyere gị aka ịmepụta ikike nke ntanetị mgbasa ozi na-eru ndị na-ege ntị.Ndị na-agụ akwụkwọ na-adị njikere mgbe niile ịkekọrịta mgbasa ozi dị mma. Ya mere, gbakwunye bọtịnụ ahụ na postiji mee ka ọdịnaya gị gwọọ. Nke a pụtara na ndị na-agụ gị ga-enwe ike ịkọrọ gị blog postsndị enyi na ndị enyi ha. Dị ka ihe si na nkekọrịta a, blog gị ga-enwekwu okporo ụzọ.
5. Ikwu na ntaneti ndi ozo
Comments aghọwo ngwá ọrụ dị ike, nke na-enyere gị aka ịnweta backlinks na okporo ụzọ. Lelee anyablọọgụ blọọgụ na ikwu okwu banyere isiokwu na forums ha. Okwu ndị bara uru ga-adọta uche,ma yikarịrị, ị ga-enweta azịza nke na-enye gị backlinks. Comments ga-eme ka ị bụrụọkachamara ma nyere gị aka ịchọta nza nke okporo ụzọ gị blog.
Semalt ọkachamara Ivan Konovalov gosiri na agbanwe agbanwe mmejuputa nke kwuru n'elu azum eduiji mee ka mgbasa ozi gị. Ndị ahịa anyị nwetara ụdị omume ahụ nke ọma ma kwenyearụmọrụ ya. Site ugbu a gaa n'ihu, ịnwere ike iji ndụmọdụ ndị a nakwa ọrụ ọrụ nke Ọkachamara iji webata gị na ọkwa ọzọ Source .